Eto ianao manana ny safidy hafa rehetra an'ny Wallpaper an'ny macOS Monterey | Avy amin'ny mac aho
Eto ianao manana ny safidy hafa rehetra an'ny Wallpaper an'ny macOS Monterey
Efa herinandro izay no nanoloran'i Apple ny kinova vaovao an'ny macOS Antenaina fa ho amin'ny Mac maro izy amin'ny faran'ny taona. Amin'izao fotoana anananantsika azy amin'ny beta ary azo antoka fa maro kokoa ny olona no hisintona azy tsikelikely hatrizay dia ho an'ny mpamorona ihany no misy azy io. Na izany na tsy izany dia afaka manana mialoha mialoha amin'ny solosaintsika isika, na dia amin'ny endrika Wallpaper ihany. Azonao atao ny manana ny variana rehetra misy.
Ireo fiasa vaovao an'ny macOS Monterey dia tsy dia be loatra fa misy. Na izany aza, marina fa afaka milaza isika fa rafitra mitohy io. Misy fiasa sasany izay ho hita amin'ny Macs miaraka amin'ny M1 ihany ary noho izany ireo mifanentana izay havaozina fa manana ny chip Intel, dia tsy ho afaka ny hahazo azy ireo. Ah raha izany dia. Ny marina dia tsikelikely dia hahita fiasa bebe kokoa isika. Amin'izao fotoana izao mijanona miaraka amin'ny hatsarana isika izay ny sary an-tsary amin'ity macOS 12 ity.
Amin'ity fomba ofisialy ity, andiana mpankafy maromaro no nanao karazana loko sy hazavana amin'ny haingon-trano. Ohatra, manana ny kinova noforonin'i @MattBirchler,iza no mitantana ny bilaogy Birchtree, bilaogy manokana momba ny teknolojia nanomboka tamin'ny 2010. Izy ireo dia sary an-tsary na sary an-tsary izay toa tsara amin'ny efijery rehetra an'ny Mac antsika. Mety tsy maintsy manamboatra kely ianao arakaraka ny haben'ny efijery, fa ho tsara tarehy izy ireo. Ireto misy azonao sintonina:
MacOS variant amin'ny maody manga sy maitso
macOS amin'ny maizina manga sy maintso
Maody mavokely macOS Monterey rindrambaiko
Pink macOS Monterey miova endrika maody maody
MacOS Monterey volavola mainty sy fotsy novaina tamin'ny maody maivana
Ny rindrina MacOS dia nanova ny mainty sy fotsy amin'ny maizina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Monterey » Eto ianao manana ny safidy hafa rehetra an'ny Wallpaper an'ny macOS Monterey